कान्समा प्रियंकाः आउँदा लुसुक्क, जादा शेर ! - Sutra TV Sutra TV
कान्समा प्रियंकाः आउँदा लुसुक्क, जादा शेर !
प्रियंका कार्की कान्स फिल्म फेस्टिभलबाट फर्किसकिन् । जाने बेलामा ठूलै तामझाम गरेर गएकी उनी आउने बेलामा किन सुटुक्क आइन् होला ?
जाने बेलामा युटुबमा ठूलै कुरा गरेर गएकी प्रियंकालाई आएपछि लुसुक्क घरमै युटुब बोलाएर इन्टरभ्यू दिन किन परेको होला ?
देशको प्रतिनिधित्व गर्ने अभिनेत्रीले छाती फुकाएर हो मैले देशको प्रतिनिधित्व गरेर आए भन्ने राष्ट्रिय मिडियामा बोल्न किन सकिनन् ?
अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले कान्समा जाने बेलामा जे जे कुरा भनेकी थिइन्, त्यो केही पनि पुरा गरिनन् । उनले त बरु, अरुको पहिरन कपी गरिन्, कोठा भित्र बसेर फोटो खिचाइन्, एकाध फिल्मका प्रिमियरमा सहभागी भइन् र आइन् ।
यसैले पनि उनीसँग दिने जवाफ छैन । कान्समा प्रियंका जानु र आउनुको विरोध यहाँ गरिएको छैन । मात्र, उनले जे भनेर गइन् त्यो गरिनन् भन्ने हो ।
देशको प्रतिनिधित्व गर्छु, देशको उचाई बढाउँछु, देशको संकृती झल्काउँछु भनेर गएकी अभिनेत्रीले त्यो पुरा गरिन् कि गरिनन् भन्ने मात्र हो । गरेको भए उनको आलोचना गर्न आवश्यक थिएन ।
यी सबै कुरा नगरेको भए पनि जाने बेलामा यती साह्रो तामझाम देखाएर, मिडियाबाजी गरेर नगएको भए पनि उनको आलोचना गर्न आवश्यक थिएन । तर, अभिनेत्री कार्कीले यी कुनै काम गर्न सकिनन् ।
उनले त कान्सको बारेमा वुझेको नै पाइएन । कान्सको रेड कार्पेटमा हिड्छु भनेकी प्रियंकालाई रेड कार्पेटमा हिड्न कसरी पाइन्छ, यसका लागि के कस्ता कडाई छन् भन्ने पनि थाहा रहनेछ । बस, हिड्छु भनेर गएकी उनी त्यहाँ गएपछि आफै जिल खाइन् होला ।
अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले नेपाल आएपछि प्रेसमिट गरेर भन्न सक्नुपथ्र्यो, कि उनले के के गरिन् ? आलोचना भएका कुरालाई स्पष्टिकरण दिन सक्नुपथ्र्यो । संचारकर्मीका प्रश्नका जवाफ दिने क्षमता उनमा देखिएन । जाँदा हल्ला गरेकी प्रियंकालाई आउँदा यसरी लुसुक्क छिर्नुपर्ने थिएन ।
प्रिमिरमा पुग्ने एलिसा फिल्म चै कहिले खेल्ने ?
मन राख्न सिपालु उपासना
नेपाली फिल्ममा नफापेका बलिउडका कलाकार
रेनशाको दिमाग दुई तिर चल्यो
दयाको ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ले बनाउला नयाँ रेकर्ड ?